Cerro del Hierro, waa yaab dabiici ah oo ka jira gobolka Seville | Wararka Safarka
Luis Martinez | | Ekotourism, Getaways
Cerro del Hierro waa taallo dabiici ah oo cajiib ah oo ku yaal gobolka Sevilla durba ku dhowaad toddobo boqol oo mitir oo ka sarreeya heerka badda. Ka faa'iideysiga sidii miinada tan iyo wakhtiyadii Roman, waxay sameysataa, oo ay weheliyaan hareeraheeda, Seeraha Dabiiciga ah ee Sierra Norte.
Sida magaceedaba ka muuqata, waxaa aad loogu qiimeeyay hodantinimada ku jirta bir ee dhagaxyada nuuradda leh. Laakiin hadda muhiimaddu waxay ku jirtaa muuqaalka quruxda badan ee dusha sare ka dhigaya karst. Iyo, wixii ka sarreeya, qiimaheeda dabiiciga ah iyo inuu ku habboonaado socodka iyo fuulitaanka. Hadaad rabto inaad sifiican ubarato Cerro del Hierro, waxaan kugu dhiirinaynaa inaad sii wadato aqrinta.
1 Isku xirnaanta Cerro del Hierro
2 Waxyaabaha lagu sameeyo Cerro del Hierro
2.1 Wadada cagaaran ee Sierra Norte de Sevilla
2.2 Wadada Cerro del Hierro
2.4 Magaalada macdanta
3 Labada magaalo ee quruxda badan agagaarka Cerro del Hierro
3.2 Saint Nicholas ee Dekedda
4 Sida loo tago Cerro del Hierro
Isku xirnaanta Cerro del Hierro
Asalka Cerro del Hierro wuxuu soo bilaabmay Xilligii Cambrian, taasi waa in la yiraahdo qiyaastii shan boqol oo milyan oo sano ka hor. Waxaa laga sameeyay sariiraha badda ee loo rogay dhagxaanta nuuradda. Ka dib, dhulku waa karstified u beddelashada qayb ka mid ah hodannimadeeda birta loo beddelo oksaydh iyo hydroxides oo iyana xididdada samaysma.
Waxaas oo dhan waxay keeneen in la qodo Cerro del Hierro, taas oo, sidaan kuu sheegnay, ay bilaabeen Roomaanku. Horaantii qarnigii XNUMXaad, shirkadaha Scottishku waxay soo saareen macdanta oo ay abuureen magaalada taas oo weli la deggan yahay sidaa darteedna weli waad booqan kartaa maanta. Xitaa waxaa jiray khad tareen oo ku xira aaggan iyo dekedda Seville wareejinta birta.
Nolosha aagguna ma ahayn inay fududaan, maxaa yeelay waxaa loogu yeeraa "Sevillian Siberia", oo laga yaabo in xoogaa buunbuunin ah. Si kastaba ha noqotee, runtu waxay tahay, xilliga qaboobaha, heerkulka dhowr darajo ka hooseeya eber ayaa dhaca.
Waxyaabaha lagu sameeyo Cerro del Hierro
Sida aan u sharraxnay, aaggan ayaa ku habboon fuulitaanka iyo socodka. Marka laga hadlayo tan dambe, waxay leedahay kaymo jiq ah iyo dariiqyo dhowr ah oo aad u qurux badan oo aanad ka maqnaan karin. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa laba ka mid ah tusaale ahaan.
Wadada cagaaran ee Sierra Norte de Sevilla
Sida saxda ah Qaab dhismeedka tareenka in aan horay u soo sheegnay ayaa hada loo badalay waddo cagaaran oo aad ku mari karto lug ama baaskiil buur. Qayb ka mid ah magaalada macdanta lafteeda iyo, gaar ahaan, waxa loogu yeero Guriga Ingiriiska, oo hoy u noqotay injineerada iyo maareeyayaasha miinada hore. Waqtigan xaadirka ah, waxaa ku yaal a Xarunta tarjumaadda dusha Cerro del Hierro.
Wadada Cerro del Hierro
Waa waddo kale oo aad u fudud maxaa yeelay waxay leedahay laba kiiloomitir oo keliya. Waxaa haboon in loo booqdo quruxdeeda dabiiciga ah, qaababka dhagaxa sida u gaarka ah tuubbooyinka iyo irbadaha. Laakiin sidoo kale maxaa yeelay waxay gasho godadka iyo qolalka miinooyinka hore.
Cerro del Hierro sidoo kale waa goob ku habboon fuulitaanka. Xaqiiqdii, waxaa jira meesha ugu muhiimsan ee lagu ciyaaro isboortiga dhammaan gobolka Seville. Guud ahaan, waxay leedahay qaar boqol iyo labaatan jid oo ay ku jiraan qaar ka mid ah fuulitaanka caadiga ah laakiin sidoo kale kuwa kale oo casri ah oo adag. Hadaad jeceshahay ciyaartan, waa lama huraan inaad ogtahay Cerro del Hierro.
Ku raaxeysiga dabeecada, waxaan kugula talineynaa inaad booqato magaaladii hore ee macdanta ee aan horey kuugu sheegnay. Dhexdeeda, ka sokow inaad aragto hadhaaga guryaha, waxaad sidoo kale daawan doontaa dhismaha macdanta, bakhaarrada, a Kaniisadda Anglican iyo duug xarunta tareenka. Waxaad sidoo kale leedahay xarunta tarjumaada ee aan soo sheegnay iyo maqaaxi aad batterigaaga dib ugu buuxin karto.
Kaniisadda Old Anglican ee magaalada Cerro del Hierro
Labada magaalo ee quruxda badan agagaarka Cerro del Hierro
Laakiin booqashadaada layaabkaan dabiiciga ah waxay noqon doontaa mid aan dhameystirneyn haddii aadan aqoon labada magaalo ee quruxda badan ee ka agdhow, oo dhowr kiilo mitir uun u jira, oo u dhexeeya kan ugu quruxda badan gobolka Seville. Waan kuu sheegeynaa iyaga.
Aad ugu dhow Cerro del Hierro waxaad ka heli doontaa magaaladan yar oo cad oo ay ku nool yihiin qiyaastii lix kun oo qof oo deggan Sierra Morena. Lagu dhawaaqay Dhisme Faneed Taariikhi ah, magaalada Constantina wax badan ayaa kuu soo bandhigi kara.
Si aad u bilowdo, waad booqan kartaa kooda qalin. Waxaa la dhisay waqtiyadii Carbeed ee laga yaabo inay ku sii jiraan hadhaagii qalcad hore. Si kastaba ha noqotee, wax ka beddelkeedii ugu dambeeyay wuxuu ka bilaabmay qarnigii XNUMXaad. Waa Hantida Xiisaha Dhaqanka, in kasta oo waqtigu ka dib dhibaato u horseeday, haddana dib-u-habeyn ayaa lagu sameeyay dhowaan.
Sidoo kale waa inaad booqataa Constantina the Kaniisadda Our Lady of Jidhka, macbudka Mudejar laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad, in kasta oo dhismaheeda quruxda badan uu ka yimid qarnigii XNUMXaad. Sidoo kale talo bixin ayaa ah booqashada kaniisadaha Nuestro Padre Jesús iyo La Concepción iyo wadaadada Santa Clara iyo Tardón.
Laakiin waxaa laga yaabaa in waxa ugu quruxda badan ee ku saabsan Constantina uu isagu yahay koofiyad taariikhi ah, oo leh dhismaha neoclassical-ka ee Town Hall iyo guryo badan oo sharaf leh oo ku yaal gobolka ama qaab isku mid ah. Muunad wanaagsan oo iyaga ka mid ah ayaa ah Casa qasriga tirinta Fuente. Ugu dambeyntiina, waxaan kugula talineynaa inaad ku dhex marto xaafadda Morería oo aad aragto Taallada Saacadda.
Saint Nicholas ee Dekedda
Sidoo kale dhowr kiilomitir oo u jirta Cerro del Hierro waxaad ka heli doontaa magaaladan quruxda badan xitaa ka yar tii hore maadaama ay ku nool yihiin ilaa lix boqol oo qof. Dhexdeeda waad ku booqan kartaa quruxda badan Kaniisada Mudejar ee San Sebastián, gudaha taas oo ah farta lagu baabtiisay San Diego de Alcala.
Mid kale oo ka mid ah taalooyinkeeda ayaa ah hermitage ee San Diego, sidoo kale Mudejar. Iyo, kuwaas oo ay weheliyaan, Buundada Roman dusha sare ee wabiga Galindón, qarnigii XNUMX-aad ee dhagaxa iyo hadhaagii munaaraddii muslimiinta.
Laakiin San Nicolás del Puerto wali waxay kaa leedahay la yaab kale. Waxay ku saabsan tahay Hallsna biyo-dhacyo, Taallo dabiici ah oo aan kugula talineyno inaad aragto. Waxay ka kooban tahay koox biyo-dhacyo yar-yar iyo barkado ku wareegsan keymo iyo geedo webiga jiinkiisa ah.
Sida loo tago Cerro del Hierro
Sida kaliya ee ay tahay inaad ku tagto meeshan dabiiciga ah ee cajiibka ahi waa wadada. Waxaad ka heli kartaa Constantina ilaa koonfurta ama San Nicolás del Puerto ilaa waqooyiga. Marka ugu horeysa, waa inaad qaadataa wadada A-455 ka dibna ah SE-163. Dhinaca kale, haddii aad ka soo safarto San Nicolás, wadada waa, si toos ah, ah SE-163.
Gabagabadii, Hill Hill Waa taallo dabiici ah oo cajiib ah oo aad fuuli karto fuulitaanka iyo socodka. Laakiin sidoo kale naftaada ku raaxee muuqaalkeeda oo booqo labada magaalo ee quruxda badan ee aan soo sheegnay. Haddii aad fursad hesho, soo booqo, kama qoomameyn doontid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Ekotourism » Hill Hill
Xeebaha ugu fiican Azores